KuCoin Crypto Exchange Hacked, Over $150 Million Lost | CoinGenius Hosts Virtual Crypto Event
The KuCoin team has responded responsibly to the security breach. The exchange’s CEO, Johnny Lyu, held a livestream a few hours ago where he ethembisiwe that all the affected users will be compensated fully by KuCoin and its insurance fund.
Fortunately, Bitfinex and Tether successfully froze a total of 33 million of the frozen funds. This is ngokuvumelana ne the CTO of both crypto firms, Paolo Ardoino.
The founder of Tron, Justin Sun, has also pledged his support for KuCoin. Sun kuphawulwe that Tronscan (Tron blockchain explorer) will flag the hacker’s addresses while Poloniex remains on high alert in case the stolen funds are sent to the exchange.
Izihloko ezihlobene:AmakheliukuhlaselaukuhlolwaBinanceBitcoini-bitcoin (BTC)I-BitFinexBITMAXblockchainBTCI-BybitCeocryptoI-Crypto Exchangecrypto exchange hackedAma-Crystal ExchangeIzindaba ze-CryptoAma-cryptocurrenciescryptocurrencycryptocurrency exchangeIzindaba zansuku zonke ze-Cryptoidathaehloniphekileezezimali ezihlukanisiweIzimali ezihlukanisiwe (i-DeFi)DefiidiphoziukuphoqelelaI-ERC-20I-ETHEthereumI-Ethereum (ETH)ukushintshanisaUkuhwebelanaBAMBILIEzezimalizezimaliisikhwamaHackngaphandle kwemvumehackerkubaduniBambaHuobiInsuranceUkubekaJustin LangeniKuCoinLawzokusakazaMarketIzindabaOKExUPaolo ArdoinopoloniexInaniamananiProjectsUcwaningonokuvikelekai-tetherUkushintshaniswaAmadokhumentitopTronbuyekezawallets
'Iminyaka eyishumi yokulethwa' kwe-UN idinga i-blockchain ukuze iphumelele
I-XRP Bulls Ingena Ngokukhuphuka Kwansuku zonke ngo-5%, Ingabe Okulandelayo kungu- $ 0.30? (Ukuhlaziywa kwentengo ye-Ripple)
IBitTorrent Iqalisa iBitTorrent X Ecosystem Elandela Ukutholwa Kwe-DLive
Ukusakazwa: I-Leveraging Binance Smart Chain yokuhlinzeka ngemisebenzi eminingi
I-Bitcoin ingabhalisa ukuvalwa kwesibili okuphezulu kakhulu kwanyanga zonke emlandweni: Peter Brandt
Isikhathi Esingachithi: Kubikwa ukuthi i-PayPal ibheka ukuthenga izinkampani ze-Crypto, kufaka phakathi iBitGo
I-XRP / USD - Abathengi Ekugcineni Baphula Phezulu Konxantathu Olinganayo
Amazinga Okusekelwa Akhiye: $ 0.26, $ 0.251, $ 0.245.
Amazinga Okumelana Nokubalulekile: $ 0.261, $ 0.271, $ 0.279.
I-XRP idlule ku-rollercoaster yesenzo sentengo izolo njengoba ifike yafika ku- $ 0.271 (bearish .618 Fib) futhi yehla njenge- $ 0.228 (.618 Fib) phakathi namahora angama-24.
I-cryptocurrency ibithengiswa ngaphakathi kukanxantathu ohambisanayo futhi ibuye yasuka emngceleni ophansi ekuqaleni kwesonto. Yize i-whipsaw ifana nokunyakaza izolo, ikhandlela lansuku zonke lisavaliwe ngaphansi komngcele ongunxantathu ongaphezulu.
Namuhla, i-XRP icindezele phezulu ukuze iphuke iye ngaphesheya kwale nxantathu. Ifinyelele ekumelaneni ngo- $ 0.261, inikezwe ngeleveli ye-bearish .5 Fib Retracement.
Ukuqhubekela phambili, uma abathengi bengaphula izinga lamanje le- $ 0.261, ukumelana okuphezulu kulele ku- $ 0.271 (bearish .618 Fib Retracement). Ukulandela lokhu, ukumelana kulele ku- $ 0.279 (1.414 Fib Extension), $ 0.286 (bearish .786 Fib), $ 0.295 (bearish .886 Fib), naku- $ 0.3.
Ngakolunye uhlangothi, izinga lokuqala lokusekelwa lilele ku- $ 0.26. Ngaphansi kwalokhu, ukwesekwa kulindeleke ku- $ 0.251, $ 0.245 (100-days EMA), naku- $ 0.237 (200-days EMA).
I-Stochastic RSI ikhiqize isignali ye-crossover ene-bullish, esize i-push yakamuva yaphakama.
I-XRP / BTC - I-XRP Ingena kafushane ngaphansi kwe-2000 SAT.
Amazinga Okusekelwa Akhiye: I-2000 SAT, 1960 SAT, 1915 SAT.
Amazinga Okumelana Nokubalulekile: I-2050 SAT, 2127 SAT, 2200 SAT.
I-XRP ibilokhu idonsa kanzima kuyo yonke inyanga ka-Okthoba ibhekene neBitcoin. Izolo, uhlamvu lwemali luwe kusuka ku-2050 SAT lwaphuka ngaphansi kuka-2000 SAT. Iqhubekile nokuthinta phansi njenge-1915 SAT lapho ithole khona ukuxhaswa endaweni engezansi engu-1.618 Fib Extension.
Uhlamvu lwemali lukwazile ukuvala ikhandlela lansuku zonke ezingeni le-1960 SAT level (downside 1.272 Fib Extension) futhi seliphinde labuyela emuva ngaphezu kuka-2000 SAT namuhla njengoba lidayisa ngo-2015 SAT.
Uma ubheka phambili, uma abathengi beqhubeka nokuphakama, izinga lokuqala lokumelana lilele ku-2050 SAT. Ngaphezu kwalokhu, ukumelana kulele ku-2127 SAT (bearish .236 Fib), 2200 SAT, naku-2260 SAT (bearish .372 Fib & 100-days EMA).
Ngakolunye uhlangothi, uma abathengisi behlehlela emuva ngaphansi kuka-2000 SAT, ukusekelwa kulele ngo-1960 SAT, 1915 SAT, naku-1900 SAT.
I-Stochastic RSI isensimini ebhekwe ngokweqile njengoba silinde isignali ye-crossover enamandla ukuthumela imakethe ephakeme.
IBitTorrent Inc., inkampani eqinile elandela uhlelo oludumile lweBitTorrent nohlelo lokusebenza, isimemezele ukutholakala kwayo kwe-blockchain-powered live streaming platform DLive.
I-DLive manje isizoba yingxenye yesistimu esanda kusungulwa ye-BitTorrent X ecosystem, efaka ne-BitTorrent File System (BTFS), insiza esetshenziselwa ukugcinwa nokugcinwa kwamafayela, kanye neklayenti le-BitTorrent, elizosetshenziswa ukuletha lezi zinsizakalo nokuningi kubasebenzisi.
Ishintshela ku-BitTorrent X
Selokhu umthetho olandelwayo weBitTorrent waqala ukwenziwa ngonyaka we-2001, usuphenduke uhlelo olusatshalaliswa kakhulu lontanga nolusebenza ngempumelelo. Isivele isetshenziswe ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidigidi ezi-2 emhlabeni jikelele - kufaka phakathi abasebenzisi abakhulu bebhizinisi abanjengoFacebook, Twitter, neBlizzard.
Iphrothokholi yokwabelana ngamafayela weBitTorrent nayo ibonakala iyinkuthazo ehilela uSatoshi Nakamoto maqondana nokwakhiwa kweBitcoin (BTC), njengoba kuchaziwe ku umlayezo ithunyelwe nguNakamoto ku-Cryptography Mailing List.
Ngemuva kokutholwa yisikhulu se-TRON u-Justin Sun ku-2018, I-BitTorrent iye yalukwa kancane kancane ku-econstem ye-TRON blockchain ekhula ngokushesha, ne-BitTorrent File System (BTFS) manje isetshenziswa yi-TRON blockchain ne-DLive njengesixazululo sokubeka endaweninye.
Ngokutholwa kwe-DLive, iBitTorrent manje isilungele ukudlulela esigabeni esilandelayo sokunwetshwa kwayo: ukwethulwa kweBitTorrent X - uhlelo lwezemvelo oluqukethe i-BTFS, izinhlelo zokusebenza zeBitTorrent (kanye ne-μTorrent), ithokheni yeBitTorrent (BTT), futhi manje iDLive .
I-DLive iyipulatifomu ehamba phambili yokusakaza bukhoma ene-blockchain futhi njengamanje inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-7 nabadali bokuqukethwe abangama-200,000.
Abanye babadali bayo abaphezulu bahlanganisa iPewDiePie, tugaygokyt, ne-enesbatur - ngamunye wabo unamakhulu ezinkulungwane zabalandeli ngenxa yemidlalo yabo edumile kanye nokuqukethwe okusakazwa bukhoma kwezemidlalo.
"I-BitTorrent X isinyathelo esilandelayo ekusunguleni i-intanethi ehlukanisiwe ngempela," kusho uJustin Sun, umsunguli we-TRON kanye ne-CEO yeBitTorrent. “Esinyathelweni esisodwa esikhulu, uhlelo lwezinto eziphilayo lweBitTorrent X lungashayela amathuluzi ahlobene ne-blockchain kuya kumadivayisi ayizigidigidi. Amakhulu ezigidi zabasebenzisi azokwazi ukufinyelela inkathi elandelayo yamathuluzi okwabelana, ukugcina nokusakaza okuqukethwe kwabo ngqo kunoma ngubani kuwebhu yonkana. ”
Ngokwesimemezelo, uhlelo lwe-BitTorrent X ecosystem luzonikezwa amandla yi-BTT cryptocurrency, esivele isetshenziselwa ukukhuthaza abasebenzisi ukuthi babelane ngendawo yabo yokugcina ku-BTFS, futhi ingafakwa ku-DLive ukuthola imivuzo.
UJustin Sun, umsunguli we-TRON kanye ne-CEO yeBitTorrent
Kulindeleke ukuthi ukuhlelelwa kuzovumela abasebenzisi abangaba yizigidigidi ukuthi bakwazi ukufinyelela ekwabelaneni ngamafayela nezinsizakalo zokusakaza bukhoma, ngobulula obufanayo nobulula bokusebenzisa abasebenzisi abalindele kusuka kuzicelo zeBitTorrent ne-TRON.
“Ukutholwa kubonisa ukuqala okusha kwe-DLive.tv. Sijabule kakhulu ukujoyina uhlelo lwezinto eziphilayo lweBitTorrent njengoba ukusebenzisana kuzosinikeza izixazululo ezintsha zokunika amandla abadali bokuqukethwe nokuvuza imiphakathi. ” kusho uCharles Wayn, isikhulu esiphezulu se-DLive, "Ngokubambisana nethimba leBitTorrent, sibheke phambili ekuletheni izinto ezintsha eziphazamisayo esikhaleni semidiya yedijithali, futhi ngaphezu kwalokho sakhe inzuzo emphakathini wethu womhlaba wonke."
Izinyanga ezimbalwa ezedlule bezigcwele izindaba ezivela kuBitTorrent naseDLive. Ngenyanga edlule, bekunjalo kumemezela ukuthi i-TRON manje isizosebenzisa i-BitTorrent File System (BTFS) njengesixazululo sokugcina idatha sama-TRON node, okwenza ama-node amasha angene kwinethiwekhi abe lula futhi asheshe. Ngokunjalo, iDLive isanda kuqeda ukunikezwa kwayo i-Lemon #StayAtHome engu-2 million, isiza ukuxhasa ababukeli bayo kanye nabasakazi bayo ngesikhathi sokuvalwa kwe-COVID-19.
IDeFi ngokungangabazeki yaqhuma ngo-2020 njengoba imboni yabona ukukhula okungakaze kube khona kusukela ngoMashi. Eqinisweni, idatha iphakamisa ukuthi njengamanje kukhona cishe ama- $ 11.2 billion aboshwe ezinhlelweni ezahlukahlukene zokubolekisa ku-ecosystem.
Yize lokhu kungenzeka kumangaze abaningi ngandlela thile, kuza njengokunwetshwa kwemvelo nokunengqondo kwenkambu ye-crypto. Ngemuva kwakho konke, leyo yinhloso ejwayelekile yama-cryptocurrensets - ukwehlukanisa umbuso nemali ngeleja engaguquguquki futhi enikezwe amandla.
Ngokulindelekile, noma kunjalo, izinkampani eziningi zaqala ukuvela, zihlinzeka ngezinsizakalo ezahlukahlukene ezenzelwe i-DeFi ezinhlakeni ezahlukahlukene.
Ukusakaza kungenye yalezi zinhlelo. Isebenzisa ukuvinjelwa kwe-cryptocurrency exchange enkulu kunazo zonke emhlabeni - I-Binance Smart Chain, ukunikela ngenqwaba yezinsizakalo zezezimali, ezempilo, ezemidlalo nezesayensi.
Njengoba kushiwo kuphrojekthi umhlophe osemthethweni, I-Streamity yinkampani ezimele enesistimu yokuphathwa komphakathi eyakhelwe ku-Binance Smart Chain. Ihlose ukuhlinzeka ngezinsizakalo emkhakheni wesayensi, ezempilo, ezezimali, ezemfundo nezemidlalo.
Ithimba lakha uhla lwemikhiqizo ehlukene esebenzisana neBinance Smart Chain kanye nethokheni lendabuko yenqubo ebizwa nge-STM.
Njengoba intshisekelo kuyo yonke inkambu ikhula kuphela, kufanele nesidingo sethokheni ye-STM. Ithimba liphethe ukuthi uhlelo lwezemvelo oluholwa ngumphakathi olunentuthuko eqhubekayo nokuzimela luzosebenza kakhulu. Njengamanje, ithokheni ye-STM isendleleni eya kulo mkhankaso, futhi idalwe ngohlelo lokubusa oluzohola ngokusobala iStreamity phambili.
Okuningi Mayelana ne-STM Token
Ngaphandle kwalokhu okungenhla, Ukusakaza Ithokheni lendabuko, i-STM, inika amandla abaphathi bayo ukuthi babe nomthelela oqondile ekuthuthukiseni i-ecosystem ngokuvota. Abasebenzisi bangavotela iziphakamiso ngalunye. Bangadlulisa futhi la malungelo ngokudlulisela amathokheni kumuntu wesithathu.
Inani eliphansi lamathokheni we-STM adingekayo ukuhambisa isiphakamiso somthetho olandelwayo yi-1% yevolumu ephelele yawo wonke amathokheni we-STM.
Ngokwabiwa, ama-40% wokuphakelwa azoya endaweni yomphakathi yamalungu omphakathi - lokhu kungeza amathokheni we-STM afinyelela ku-39.6 wezigidi. Ama-40% azosakazwa mahhala, okufaka ezinye izigidi ezingama-39.6, futhi, ekugcineni, ama-20% abekelwe amalungu eqembu nabasebenzi - isamba se-100 million STM.
Uma kukhulunywa ngokusatshalaliswa kwenzuzo, ama-50% aya ekugcwaliseni kabusha indawo ebekelwe umphakathi, ama-48% aya kumalungu eqembu nabasebenzi, kuthi ama-2% aye esizeni.
Manje, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi indawo ebekelwa umphakathi izokwabiwa njalo ngokuvotela izibonelelo, amachibi amasha okukhokhelwa kwemali, izinzuzo zokuphatha, nokuthi yini.
Ukukhuthaza abahlinzeki bamasheya bokuqala, kuzokwabiwa ama-STM ayizigidi eziyi-10 njengohlelo lokugcwalisa kabusha izikweletu olwethulwe ngo-Okthoba 12, 2020. Inamachibi ama-5, okungukuthi:
IBUSDT / STM
BNB / STM
Izinsizakalo Ezihlukahlukene ekusakazeni
Ama-Tokenomics eceleni, i-Streamity ihlose ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezahlukahlukene, njengoba kushiwo ngenhla. Ngalokhu kushiwo, nazi izinhlelo ezimbalwa ezihleliwe nezethulwayo.
Zisuka nje ku-bat, ipulatifomu ibone ukushintshaniswa kwe-P2P cryptocurrency okubizwa nge-Streamdesk okuqinisekisa ukuphumelela kokuthengiselana ngokuhlanganiswa kwezakhiwo zezinkontileka ezihlakaniphile kanye ne-APY yezinhlelo zokukhokha. Isivele yethulwe, futhi ushintsho oluya ku-BSC lusezinhlelweni.
IProject Health elinye ipulatifomu elenzelwe ukuqeqeshwa online nokuzivocavoca izinhlobo ezahlukahlukene ngohlelo lokuzuza kwezemidlalo nokukleliswa. Kufanele yethulwe kwikota yesithathu ka-2021.
IDuel Control wuhlelo lokusebenza oluqondiswe kosomabhizinisi, abaphathi abaphakathi, nabaphathi. Ihlose ukuthuthukisa ukuthuthukiswa kwamakhono okuphatha, i-psychology yethonya, ukucabanga ngamasu, njalonjalo. Ipulatifomu kufanele yethulwe kule nyanga.
ITalent Exchange Network yipulatifomu esivele yethuliwe, futhi imele inethiwekhi yokuxhumana nabantu enezinhlelo zezinhlangano nabasebenzisi, amazinga azo akhuliswa ngemfundo efanele.